Taiwan: Angatahan’ny polisy ny IP an’ireo mpampiasa ny Plurk [na ‘Plurkers’] · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Avrily 2010 19:11 GMT
Plurk dia lafika iray fitorahana blaogy kiritika isan'ny malaza ao Taiwan. Vao haingana, ny 29 MArtsa 2010, Alvin Woon, iray amin'ireo namorona azy dia nandefa ‘plurk’ iray [avy amin'ny mpandika: angamba fomba iray ilazana ny ‘hafatra’ io teny io], nilazany ny naharaisany taratasy avy amin'ny polisy mangataka ny IP an'ny sasantsasany amin'ny kaontin'ireo mpampiasa ‘plurk’. Kanefa, tsy nampiseho akory alàlana avy amin'ny fitsarna ireo polisy momba ireo IP ireo.
Raha ny filazan'i Frank Hsieh, mpisolovava miaro ny zon'olombelona ary mpitarika ny DPP , nanantitrantitra fa rehefa tsy ny fitsarana no mihevitra ny ilàna izany noho ny fanadihadiana mahakasika resaka heloka bevava, dia tsy ara-dalàna ny fangatahan'ny polisy ny tsiambaratelon'ny fiainana manokan'ireo plurkers.
Kanefa dia zava-panaon'ny polisy ao Taiwan ny mangataka amin'ireo tranonkala ny IP -n'ireo mpampiasa izany. Fa izao, araka ny fangatahan'ny DPP Kaonsilin'ny tanànan'i Taipei, dia nanamafy ny polisy fa raha ny salanisa dia fangatahana 10 isam-bolana eo no alefan'iey ireo amin'ny Plurk. Satria tsy mipetraka any Taiwan i Alvn Woon ary ny lohamilin'ny Plurk kosa dia any Amerika Avaratra, tsy nanome fahafaham-po ny fangatahan'ny polisy izy. Kanefa, ny tranonkala sasantsasany, toy ny PTT bulletin board system, ao Taiwan dia “tsara fiaraha-miasa” amin'ny polisy ary dia manome ny mombamomba ny olona mpampiasa azy amin'ny polisy na tsy misy didy avy amin'ny fitsarana aza.